Gmail Hacking is 100% work or not? / Gmail password is 100% safe or not? | Myanmar Black Hacking
0 Gmail Hacking is 100% work or not? / Gmail password is 100% safe or not?
ရုံနဲ့ အဲဒီ Gmail ကိုတိုက်ခိုက်လို့ရမလား.....လို့တွေးဘူးပါသလား။ တခြား နည်းတွေ phishing စတဲ့ နည်း တွေကကော အသုံးဝင်ပါသလား.......။ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော့် အတွေ့ အကြုံအရ online ပေါ်မှာ gmail hacking tutorial တွေကော gmail hacking tools တွေကောအများကြီးတွေ့ဘူးပါတယ်...။တစ်ချို့ဟာတွေအဆင်ပြေသလိုလိမ်ညာမှုတွေအများကြီးကြုံ ဘူးခဲ့ပါတယ်.........။တချို့ tool တွေဆိုရင် account နာမည်သိရုံနဲ့ တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်လို့ ရေးသားထားကြ ပါတယ်.....။အဲဒါတွေကော တကယ်ဖြစ်နိုင်ပါသလားး........။
မက အများကြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်......။ကျွန်တော်တစ်ခါကြုံဘူးပါတယ်......။ ဈေးဝယ်တဲ့ ဆိုက်တစ်ခုထဲ ကျွန်တော်သွားတယ်ဗျာ(မမှတ်မိတေ်ာ့ပါဘူး)...အဲဒီမှာ ၀င်ကြည့်သူလူဦးရေ 10000 ပြည့်လိုဆိုပြီးဒေါ်လာ 10000 သင်ဆုရတယ်ဆိုပြီးပေါ်လာတာ......လူကိုဖလန်းဖလန်းထသွားတာပဲ.....။နောက်ပြီး paypal ဆိုက်ကိုညွန်ထားတယ်...။သင့် paypal အကောင့်ထဲကို လွဲပေးမယ်ပေါ့.။ကျွန်တော်ကအဲဒီအချိန်တုန်းက online စသုံးတတ်ခါစ ဈေးဝယ်တဲ့ ဆိုက်ထဲဝင်တာဆိုတာလဲ မိုဘိုင်းတွေ လိုက်ရှာကြည့်တာ.......။လားလား paypal ဆိုက်အတုကိုညွန်းထားတာဗျ.....။တော်သေးတာပေါ့ ကျွန်တော်ကဒီနိုင်ငံကဆိုတော့ paypal နှင့် ဘာမှ ဆိုင်ဘူးရယ်......အဲဒါကြောင့် ဟီး.....။လူ့လောဘကိုအသုံးချပြီး အယုံသွင်းသွားတာလေ......။
online ပေါ်မှာ ဘာမှမယုံပဲ သေခြာ ညဏ်သုံးတာအကောင်းသုံးပါပဲ လိုပြောရင်းးးးးးးး
Ref - shwekoyantaw